Ning: Weghachite na Hazie ajụjụ API | Martech Zone
Ning: Weghachite na usoro API Ajụjụ
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 24, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Izu ụka a m na-arụ ọrụ na ebe anyị chọrọ iwepụta ọdịnaya site na gburugburu Obere Indiana (wuru na Ingmụ) n'ime peeji nke etiti. Na Indianapolis Fringe Ememme Nta Indiana chọrọ inye aka kwalite ihe omume ahụ.
API Ning abụghị nke a haziri ahazi, yana akwụkwọ na ngwa ngwa anaghị adị. N'ihi oge mgbochi iji mee ka ibe ahụ na-arụ ọrụ, m ga-egbutu ụzọ dị mkpirikpi kama ịkọpụta azịza kwesịrị ekwesị. Peeji dị ugbu a na-arụ ọrụ, mana ọ nwere koodu siri ike na-enweghị ọtụtụ mgbanwe. Enwere ike ịnwe nkwado ọzọ nke ọdịnaya ahụ (ihe atụ: ịhụ na a na-ahazi blọọgụ blọgụ dị iche na URL url, wdg).
Nzọ Ning si API arụ ọrụ bụ na ọ mara mma nke ukwuu ebe ịnwere ike ịnweta nsonaazụ ịchọrọ na faili RSS. Anyị rịọrọ ka onye ọ bụla blọọgụ, bido mkparịta ụka, ma ọ bụ bulite foto pụrụ iche iji ọdịnaya ha ntinye-2008. Nke a na-enye m ohere iwunye adreesị ndepụta omenala nke weghachite ọdịnaya niile (na-agbadata site na ụbọchị bipụtara na URL na-esonụ:
N'ime peeji ahụ, m na-ewepụta ma hazie data na ibe ya site na iji Klaasị RSS Class maka PHP. Pịa ka ibubaa na koodu ma ọ bụ i nwere ike lee ma obu ibudata ya.
API ma Hazie ya ”obosara =” 300 ″ elu = ”159 ″ klas =” nhazi ọkwa size-ọkara wp-image-2694 ″ />
Enwere ụfọdụ ọrụ na-adọrọ mmasị ebe a. N'ihi Tyler Ingram (site n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị m nke Vancouver!) Onye nyere aka ịhazi ụbọchị ahụ n'ụzọ ziri ezi site na Twitter.
Ọzọkwa, ọ bụghị koodu dị ọcha ma ọ gaghị agbaji nke ọma n'ime ọrụ maka ngwa ngwa - mana ọ na-arụ ọrụ. 🙂 M dochie njikọ ahụ ka a na-eduzi url ndị ahụ n'ụzọ ziri ezi, m na-ewepụ mkpado HTML ọ bụla site na ọdịnaya dị na ya, ana m ahazi ụbọchị ahụ, ma ana m amachi ọnụ ọgụgụ nke okwu egosipụta ka nsonaazụ peeji ahụ wee dị ka nke a:
Fọdụ Babble na Babbling Banshee Dị ka nyocha m nke Ezi Ihe Mwute, Sidney enwere bits na-amasị ma bits not… 8/24 11:55 AM
a API bụ nnukwu uru n'ihi na ị nwere ike ịdenye aha ọdịnaya na isiokwu na netwọkụ Ning ndị akpadoro, ma ọ bụ ịnwere ike iwekọta mkpokọta mpụga na ọdịnaya Ning. M nnọọ olileanya na Ning na-arụ ọrụ na sample ngwa na akwụkwọ otú folks dị ka m nwere ike ime nke a na-enweghị nọrọ ọtụtụ oge!
Gaa Green: 5zọ XNUMX Kwụsị iji CD na DVD